~ ဏီလင်းညို ~: နွှဲ... ပျော်....
စာရေးသူ ~ဏီလင်းညို~ စာရေးပြီးချိန် 9:32 PM
လာဖတ်သွားတယ် ငစိုးရေ ... အဲ ... ဟုတ်ပေါင် ... ဏီလင်းရေ :P
ချွဲလဲချွဲ သဲလဲသဲ ကဲလဲကဲတဲ့ ငစိုးလေးပဲ ... ။
မင်္ဂလာရှိသော သင်္ကြန်ရက်များ ဖြစ်ပါစေ နော် ... ။
ငယ်ငယ်တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ကွက်ကွက် ကွင်းကွင်း ပြန်မြင်ယောင်လာတယ်။
လာဖတ်သွားတယ်နော်.. ကိုယ်တိုင်ရေးပုံတူ ထင်တယ်. ငယ်ငယ် တုန်းက အဖြစ်အပျက်လေးတွေကို ပြန်မှတ်မိစေတယ်.. ဒါပေမဲ့ ကိုစိုး လောက်တော့ မိသားစု အလိုလိုက်ချစ်ခြင်း မခံခဲ့ရပါဘူး
ငယ်ဘ၀ ကိုပြန်သတိရမိတယ် အစ်ကိုရ ...
ငယ်စဉ်က ကလေးတို့ဘ၀ဟာ ပျော်ပါးဖို့ရာ လွယ်ပါတယ်
အခုတော့လည်း လက်ရှိဘ၀တောင် လွမ်းရတယ် ...
ဒါပေမယ့် သင်္ကြန်ဆိုတာ မသေမချင်း တနေ့တကွေ့တော့ ကြုံရအုန်းမှာပဲနော့ ... မလွမ်းတော့ပါဘူး ...း))
အတာသင်္ကြန်ကာလ အတွင်းမှာလည်း အစ်ကိုတစ်ယောက် အတာရေလို အေးချမ်းပါစေ ...
သင်္ကြန် ပိုစ့်လေး လာဖတ်သွားတယ်။ အမှတ်တရလေးတွေပေါ့ နှစ်သစ်မှာပျော်ရွှင်ပါစေ။
သင်္ကြန်သီချင်းလေးနားထောင်ရင်း ငစိုးလေးအကြောင်းဖတ်သွားတယ်... စာရေးသူရဲ့ငယ်ဘဝများလား?????????
သာကူကျိုလေးကို မျက်လုံးထဲ မြင်အောင်ရေးထားတာ... သောက်တောင်သောက်ချင်လာတယ်။ :D ကတုံးမကို ရေဝိုင်လောင်းတဲ့ အခန်းမှာ ငယ်ဘဝကို သတိရမိတယ်...
ကိုယ့်ငယ်ဘဝ ပြန်ရောက်သွားအောင် ရေးနိုင်တယ်...
ကိုဏီးဝထ္ထုလေး ဖတ်ပြီး ငယ်ငယ်က အဲလိုပဲ လမ်းထဲမှာ ရေပက်တာကို သတိရသွားတယ်။ ပက်စရာမရှိတော့ အချင်းချင်း ပြန်ပက်ကြနဲ့ ပျော်စရာ ကောင်းတယ်။
ကိုဏီးက စာရေးတော်တော့ တကယ့်ကို အဲတုန်းက ဘ၀ကို ပြန်ရောက်သွားသလို ခံစားလိုက်ရတယ်။ ကဲလဲကဲ သဲလဲသဲတဲ့ ကိုဏီးပဲနော်။း))
ကိုဏီလင်းညိုရေ ပျော်ရွှင်စရာ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်။
စာဖတ်နေရင်းနဲ့ ငယ်ငယ်တုန်းက သင်္ကြန်တွင်းတွေကို လွမ်းတယ်။ အပျိုပေါက်ရောက်တဲ့အထိ ကလေးတွေနဲ့ပဲ ရေကစားတဲ့ ကလေးဗိုလ် ညီမလေးနှစ်ယောက်ကိုလည်း လွမ်းတယ်...
နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ ပါစေ။
မိညို က ကိုယ့်အဖြစ်အပျက်လေးတွေ ရေးတဲ့ နေရာမှာ လွှတ်ကောင်းပဲအေ။
ငါတို့ကတော့ ငယ်ငယ်က ဒီထက်ဆိုးပဲ. . .
သူ့လို အိမ်ပြန်အိပ်တယ်လို့ကို မရှိတာ . . .
တနေကုန်ပဲ. . .ညနေတောင်မှ လိုက်ခေါ်လို့. . .ဟဲဟဲ
ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်ကလဲ အဲ့အတိုင်းပဲ ကိုဏီရေ...
ပြန်တောင် သတိရသွားတယ်.... :)
တော်တော် ချွဲတဲ့ ဆော့တဲ့ ငစိုးလေးပဲနော်...မျက်စိထဲမှာ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း ပေါ်လာအောင် အသေးစိတ်ရေးထားတာလေးကို သဘောကျမိတယ်...ဖတ်ပြီးတော့ ငယ်ငယ်တုန်းက ဘ၀လေးတွေကိုလည်း ပြန်လွမ်းသွားတယ်...
ငါ့အစ်ကိုကြီးလည်း နှစ်သစ်မှာ ပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာ အပြည့်နဲ့ လိုအင် ဆန္ဒဟူသမျှ တစ်လုံးတစ်ဝပြည့်ပါစေ... (ဟယ်...ဆုပေးသလိုကြီး ဖြစ်သွားပီ...ဟီးးးးးးးးးးးးးး)
တကယ်ပဲ ငယ်ဘဝ ပြန်ရောက်သွားတာ၊ ကလေးဘဝကို ပြန်သတိရအောင် ရေးနိုင်တယ်၊
ငစိုး (ခေါ်) ဏလည ...ငယ်ငယ်တည်းက နွဲ့ ဆိုး ဆိုး ခဲ့တာပါလား..
ခုရော ... ကတုံးမ နဲ့ဆော့ တုံး ပဲလား အေ့ ။
အရင် က မုန့် ဘိုး တကျပ် ဆို တာ အတော် အသုံးခံတာနော် ..ဗိုက်ကွဲအောင် စားလို့ ရတယ် ။
ငယ်ငယ်တုံးက သင်္ကြန် ပွဲ ကို လာလွမ်းသွားတယ် ...
ခုခေတ်ကတော့ ... ဗုံးးးးးး(( ရေ လောင်းသံ မဟုတ် ဖူးနော် ..
နှစ်သစ်မင်္ဂလာ ပါ ...
ကိုဏီ ရေ သိပ်မေ၇းပါနဲ့ဗျာ လေယာဉ်သံကြားရင် အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်က ထိန်းလို့ မရဖြစ်နေတယ် . . . .
ညီလေးရဲ့ သင်္ကြန်ဝတ္ထုလေးကိုဖတ်မိပြီး ငယ်ငယ်တုန်းကသင်္ကြန်ကို ပြန်အမှတ်ရလွမ်းမိသွားတယ် ညီလေးရေ
silent day မို့ တိတ်တိတ်လေးပဲ ပြန်သွားတယ်....
သင်္ကြန်ဝတ္ထုတိုလေး... တယ်ကောင်းပါလား ကိုဏီးရ... ကိုငစိုးကိုေ၇ပက်မယ်ဗျို့.............................. ဗွမ်းးးးးးးးးးးးး
ကောင်းလိုက်တဲ့ သင်္ကြန်ဝတ္တုလေးပါပဲကိုဏီရေ။ ငယ်ငယ်က ရေကစားခဲ့ တာလေးတွေကို ပြန်သတိရသွားတယ်။ စတုဒိသာတိုက်တဲ့ သာကူနဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းလည်းသောက်ချင်လာပြီ။
ဏီဏီရေ.... ပျော်ရွှင်ပါစေ နှစ်သစ်မှာ စွံပါစေ...
ဒီမှာ သင်္ကြန်ဆိုတာ ဘာမှန်းတောင် မသိဘူးးးးး T.T ဒါပေမဲ့ ကိုလင်းညိုရဲ့ ပိုစ့်ကို ဖတ်ရတာ ပျော်စရာလေး ...
မိသားစု အလိုလိုက်ခံ ရတာ အရမ်းပီတိ ဖြစ်စရာ ကောင်းပါတယ် ကိုဏီရေ... အားကျတယ်ဗျာ။
သင်္ကြန်ရနံ့တွေနဲ့ နူးညံ့လှပနေတဲ့ ချစ်စရာမိသားစုလေးရဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်ယောင်ရင်း ဖတ်ရတာ ကြည်နူးစရာပါပဲ ကိုဏီလင်းညိုရေ... မင်္ဂလာရှိသော အောင်မြင်ပျော်ရွှင်သော နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေရှင်။
သင်္ကြန်ပြီးမှ လာဖတ်ရပေမယ့် သင်္ကြန်ရနံ့တွေကို အပြည့်အဝ ခံစားလိုက်ရတယ် ငစိုးရေ...
ဟုတ်တယ်ဏီဏီရေ...မိုးငွေ့တို့လည်း ငယ်ငယ်က အဲလိုပဲ ကဲခဲ့ကြတာ သင်္ကြန်ကို......ဖတ်ရင်းနဲ့ သာကူနဲ့ မုန့်လက်ဆောင်းတောင်သောက်ချင်လာပြီ...။ သင်္ကြန်ပိတ်ရက်က မုန့်တွေကို ပြန်လွမ်းနေတယ်...။
အခုမှပဲ စာတွေဝင်ဖတ်နိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ပါနော်...
ဒီပို့စ်လေး ဖတ်ပြီး ငယ်ဘ၀ သင်္ကြန်ကာလတွေကို အမှတ်ရမိတယ်။
ရိုးရှင်းတဲ့ အရေးအသားလေးက တစ်ပုဒ်လုံး ဖတ်ပြီးသွားအောင် ဆွဲဆောင်မိစေတယ်..။ ငစိုးဆိုတာ ကိုဏီပဲလို့ ပြောစရာမလိုတော့ပါဘူးနော်။